Akụkọ - TOP 5 UnionLaser Solution fiber lasers maka ịcha ígwè na ndị ọzọ
TOP 5 UnionLaser Solution fiber lasers maka ịcha ígwè na ndị ọzọ
UnionLaser nwere ahụmahụ ọtụtụ afọ n'ịzụlite ngwọta laser.Anyị na-eweta na ndepụta dị n'okpuru TOP 5 UnionLaser Solution fiber cutters akwadoro maka ịkpụ nchara na ndị ọzọ.
Model UL1313F usoro – laser na a zuru ezu ụlọ na a retractable worktop na a slide elu n'ihu ọnụ ụzọ.Ndị ahịa na-ahọrọkarị nhọrọ nke eriri fiber optic cutter maka mpempe akwụkwọ ruru 1300x1300mm.A raara onwe ya nye maka mmepụta obere na nke ọkara.
Model UL-3015F usoro- Ndị na-egbu osisi laser na-ewu ewu dị mma maka mmepụta obere na ọkara, dị naanị na ụlọ mepere emepe (ubi arụ ọrụ nhọrọ: 2500x1300mm na 4000x1500mm, 6000 * 2000mm).Ihe owuwu a na-eji na-ebelata mkpọtụ.Nkwekọrịta zuru oke n'etiti ohere na ọnụahịa.
Model UL-3015 G usoro – Ọkachamara elu-arụmọrụ eriri cutter na a zuru ezu ụlọ.Uru ya bụ tebụl ọrụ abụọ na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ ọzọ, si otú a na-eji ngwa ngwa mmepụta zuru oke nke ngwaọrụ ahụ.Ihe mkpuchi usoro G nwere sistemu ikpochapu ụlọ 4, akụkụ na-amị amị nke ọma na ọnụ ụzọ ihu, yana igwefoto arụnyere nke nwere ihe nleba anya LCD na-enye gị ohere inyocha usoro nrụpụta.Enwere ike iji ya maka ịkpụ ihe karịrị 30mm ọkpụrụkpụ.
Model UL-600H usoro - Ọ bụ ihe kacha mma laser cutter na anyị na-enye.Akwadoro, dịka ọmụmaatụ, maka ihe ịchọ mma na maka nhazi obere ihe na izi ezi ruru 0.01mm.N'usoro isiokwu a, anyị na-eji 3 nlele windo na oghere azụ ụzọ, a pụrụ iche Ọdịdị na marble na-arụ ọrụ efere na Ọzọkwa kemeghi linear clamps, ekele nke ọbụna dị gịrịgịrị ihe ga-ike ike.
Ụdị UL-6020T usoro - Ọkachamara maka ịkpụ ọkpọkọ.Ọ nwere ike igbutu ụdị ọ bụla nke tubes gburugburu, square, akụkụ anọ.
Enwere ike ịgbatị ngwaọrụ ndị a na mgbakwunye maka ịkpụ ọkpọkọ na profaịlụ.
Okwu ole na ole tupu ịzụrụ ngwaọrụ UL site na ngalaba eriri:
Anyị na-ahọrọ nhazi nke ngwaọrụ n'otu n'otu, malite na mkpa mmepụta na mmefu ego nke ndị ahịa.
Anyị na-enye ndị isi ụdị na ike si 500W ka 20000w nakwa dị ka ultra-ngwa ngwa ọkachamara ụdị raara nye na-aga n'ihu elu mmepụta.
Laser fiber UnionLaser bụ nkwa nke ngwakọta nke akụrụngwa akara, ọrụ na imewe.
Dịka ọkọlọtọ, ndị ahịa anyị na-enweta n'efu na laser fiber ọ bụla: nrụnye na ọzụzụ onye ọrụ, ngwanrọ CYPCUT n'asụsụ dị iche iche, nyocha ọrụ efu, akwụkwọ ikike onye nrụpụta (ruo afọ 3), nkwado ọrụ ime ime n'efu, amụma nlekọta UnionLaser n'efu.